Akụkọ - Gini mere profaịlụ aluminom ji nwuo - imeghe omenala karia ma karia?
Industrial aluminom profaịlụ bụ ụdị aluminom alloy extrusion mepụtara site na ulo oru ubi ji profaịlụ ngwaahịa. Aluminom profaịlụ anwụ customization pụtara na mgbakwunye na ndị 20,30,40,50,60,80,90,100,120 na usoro usoro ndị ọzọ nke aluminom, profaịlụ alloy nwere ike ịnwe ụdị akụkụ ọzọ, yabụ ọ bụ ihe omimi aluminom nwụrụ. O bughi omenaala ya di iche, o bu omen’ala di iche.
Aluminom profaịlụ anwụ - omenala mmeghe bụ otu usoro mmepụta na usoro. Ya bụ: mbụ mmepụta nke ruru eru ebu, na mgbe ahụ na-akwadebe ruru eru aluminum alloy mmanya, na mgbe ahụ na igwe extrusion mmepụta nwere ike ịbụ. A na-ahazi ebu ahụ dịka akụkụ nke onye ọrụ dị mma, akụkụ dị iche iche nke aluminom, arụmọrụ na ịdị otu mita na akụkụ ndị ọzọ abụghị. Mepee omenala aluminom na profaịlụ aluminom nkịtị abughi ihe di iche, ma obu ihe omuma ma obu uzo elu, na mgbakwunye na nhazi, ndi ozo bu otu.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ahịa ahịa nke aluminom profaịlụ ebu oghere na customization na-amụba. Isi ihe kpatara ya bụ na ịrị elu nke ụlọ ọrụ akpaaka emeela ka ngwa nke ngwaahịa aluminom dị iche iche gbasaa. Enweela ọtụtụ ngwaahịa alloy alloy, yabụ profaịlụ aluminom na-anwụ emepe ọtụtụ ndị na-ewu ewu, achọrọ karia. Enwere ọtụtụ ngalaba ọhụụ, dịka zigzags, zigzags na ụdị adịghị mma, yana agba agba ahaziri iche.
Nhazi bu ihe otutu okwu na ndu, nke bu nke ndi okomoko nke ndi mmadu n’ekwu. Aluminom profaịlụ ebu oghere omenala bu ozo nke ulo oru aluminom alloy, uzo a nke aluminium nke aluminium, ihe omuma nke alumini bu nke mepere emepe, karia nke a, otutu ihe ohuru na mmepe iji zute ahia na-agbanwe agbanwe